10zọ XNUMX iji tọghata ndị ọbịa na-eji Psychology | Martech Zone
10zọ XNUMX iji tọghata ndị ọbịa na-eji Psychology
Azụmaahịa na-elekwasị anya naanị na azụmaahịa iji mee ka ahịa karịa. Echere m na ọ bụ mmeghe. Ọ bụghị n’ihi na ọ naghị arụ ọrụ mana ọ bụ maka na ọ na-emetụta pacenti ndị na-ege ntị. Ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị na mbelata - ọtụtụ na-echegbu onwe ha gbasara mbupu n'oge, ogo ngwaahịa a, aha azụmaahịa ya, wdg. N'ezie, aga m adị njikere ịkụ nzọ ahụ tụkwasị obi na-abụkarị atụmatụ njikarịcha ntụgharị ka mma karịa discount.
Ntughari na-abụkarị nke uche. Ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa anaghị azụrụ maka nnukwu ihe, ha na-azụkarị n'ihi ụjọ, obi ụtọ, afọ ojuju onwe onye, ​​onyogho nke onwe, ọrụ ebere… enwere ọtụtụ ihe kpatara ya. Yabụ kedu ka ị ga - esi tinye ohere ndị ahụ?
Anyị niile bụ ndị dị iche iche, ma n'ọtụtụ oge, ụbụrụ anyị na-enwe ike imeghachi omume n'ụzọ yiri nke ahụ, na ịghọta ụzọ aghụghọ ndị a n'uche ụmụ mmadụ nwere ike inyere azụmahịa gị aka ịchọta ụzọ okike iji mee ka ndị na-azụ ahịa na-ekwupụta "Ee" gaa na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Helpscout weputara ihe omuma a, 10zọ XNUMX iji tọghata ọtụtụ ndị ahịa (iji Psychology), na ị nwere ike ibudata ebook nke na-abanyekwu nkọwa.
Tags: akakabaredenjikarịcha ntụgharịdownloadebookfree ebookna-enyere akaPsychology
Mkpa nke Pịa Whitepaper
Push Marketing na Passbook na-agbanwe
Oge okpomọkụ Belinda
Dec 3, 2012 na 8:43 PM
Ghọta atụmanya gị chọrọ ma chọọ ka m chere na isi ihe dị na ịnweta ndị ahịa. Ee, anyị niile dị iche na dịka onye ọchụnta ego anyị ga-atụle ihe a. Mee usoro di iche iche iji mee ka olile anya gi kwue EE. Ejila naanị otu usoro.
Daalụ maka ịkekọrịta :)